I-Deluxe Backpack X-shape Banner
I-Deluxe Backpack X-shape Banner
Amafulegi we-Backpack Omume u-X, aziwa nangokuthiIsibhengezo esingu-X se-Mochila or Isibhengezo sikabhaka webhodi lebhodi labantu, iyithuluzi lokukhangisa elinomthelela omkhulu, eselula futhi engasindi lanoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi.Enye yemiklamo yethu edume kakhulu yesibhengezo se-backpack
Izicelo:Ukukhangisa Kwangaphakathi Nangaphandle, Imibukiso, Imibukiso, Imicimbi, Imibukiso, Amaphromoshini, Imishado, Amaphathi, Amadokodo ezithombe, Izinkomfa zabezindaba, Amasemina, Izigaba, Amakhonsathi njll.
Isibhengezo se-backpack X sisebenzisa ubhaka we-deluxe ofanayo, iphaneli engemuva ye-3D-foam enesisindo esilula esinomklamo wesiteshi sokugeleza komoya, Izintambo ezilungisekayo, lezi ziqinisekisa ukuthi ogqokile ukhululekile;ube nephakethe elikusiza ukuthi ugcine amaflaya okuthengisa, ushiye owagqokile izandla zamahhala.
Lokhuisikhwama sokukhushulwaihlanganisa isikhwama sokugcina isigxobo se-X.Isibhengezo kulula ukusethwa, mane unamathisele izigxobo zesibhengezo esingu-X kubhaka bese uxhuma isibhengezo esinama-grommets ekhoneni ngalinye (Isibhengezo asifakiwe) kumahhuku ekugcineni kwepali ngayinye.
Ukukhangisa kwamaselula ojosaka kuyindlela enhle kakhulu yokugqama endaweni eqinile futhi uhehe ukunaka kwamakhasimende angaba khona futhi wandise ithrafikhi nokuthengisa kunoma yimuphi umcimbi, umbukiso wezohwebo, noma umbukiso.
Umkhiqizo welungelo lobunikazi, idizayini yokufaka ifulegi emisha.Iqalwe iklanywe ngabakwa-WZRODS emhlabeni wonke
Iphaneli elingemuva le-3D-foam elibunjwe ngesisindo esilula elinomcamelo futhi livumela idizayini yesiteshi sokugeleza komoya, inikeze ukunethezeka kokusebenzisa isipiliyoni
Ikhompathimenti enoziphu namanye amaphakethe anikeza isikhala esengeziwe sokukhulula izandla zakho.
Ibhande elilungisekayo livimbela ubhaka ukuthi unganciki emoyeni onamandla.
Izingwegwe ziklama emabhandeni amabhodlela amanzi
Izinto ze-Oxford zenza ubhaka uqine futhi uhlale isikhathi eside ukuze usetshenziswe isikhathi eside.
I-Pole in carbon composite fiber, amandla aphezulu futhi iqinile kune-aluminium noma i-glass fiber pole
Ikhodi yento Usayizi Wokuphrinta Isisindo usayizi wokupakisha
Ubhaka X 120cm*50cm 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Thola okunye okunye kwethuibhanela lokuhamba likabhaka
Okwedlule: Ifulegi le-backpack & sign
Olandelayo: Ithangi Lamanzi
I-Backpack Deluxe - B
I-Deluxe Walking M-shape Backpack Advertising
I-Backpack Deluxe - Ibhola